Nhau - Mbudzi 11, 2018 rwizi flo kambani yeCanada
Mbudzi 11, 2018 rwizi flo kambani yeCanada
Noushamwari Canada Stream Flo Kambani yekushanyira cepai
Na14: 00 masikati munaNovember 11, 2018, Curtis altmiks, director wepasi rese wekutenga weStream Flo Kambani muCanada, naTrish Nadeau, mutengesi wecheni, achiperekedzwa naCai Hui, maneja mukuru wekambani yeShanghai, vakashanyira cepai kuti vaongorore. VaLiang Guihua, Sachigaro wecepai, vakaperekedzwa netsiva.
Stream Flo Kambani yakavambwa muna 1969, ndiyo inoparadzira gurusa peturu yemagetsi musangano muCanada, uye zvigadzirwa zvadzo zvinotumirwa kune dzinopfuura nyika mazana matatu kutenderera pasirese. Nekuwedzera kwemafuta epetroleum musika gore rino, bhizinesi repasirese reStream Flo Kambani riri kuwedzera nekukurumidza, nekuda kwezvekuvandudza zvinodiwa, ivo nekukurumidza vanofanirwa kutsvaga vharuvhu yakawanda uye vatengesi muChina.
Inoperekedzwa nemaneja maneja weECAPI, timu yeStream Flo Kambani yakaongorora kugadzirwa uye kugadzirwa kwemaitiro eECPAI zvigadzirwa kubva pakugadzira zvinhu, zvakashata machining, kupisa kupisa, kupedzisa, gungano, kuongorora fekitori uye akasiyana maitiro ekugadzira. Pese pakuongorora, Trish Nadeau akanyanya kutarisisa kurapa kwezvigadzirwa zveECPAI mukugadzirwa kwekugadzira, senge kutarisisa manejimendi uye chengetedzo yekutaridzika kwechigadzirwa nezvimwe zvakadaro, mhedzisiro yacho yaigutsa.
Maitiro ese ekuongorora anonakidza uye anogutsa. Stream Flo Kambani inotenda muECPAI yekugona kugona uye mhando sisitimu yekugona kugona. Curtis altmiks akataura kumusangano kuti aida kutanga hushamwari pamwe nekubatana neECPAI. Sachigaro VaLiang vanotendawo zvikuru timu yeRwizi Flo nekutora nguva kubva pabasa ravo rakabatikana kushanyira Cepai. Uye zvakare akataura kuti CEPAI ichaita zvakanyanya kuyedza muhunhu hwechigadzirwa uye nguva yekuendesa kuzadzisa zvinodiwa neStream Flo Company.
Post nguva: Nov-10-2020